Warar - Inbadan Ka Baro Sheekada Meari
Hangzhou Meari Technology Co., Ltd. waa soo saaraha hogaaminaya aduunka ee alaabada guryaha casriga ah. Meari wuxuu diiradda saarayaa teknoolojiyada horumarsan sida teknolojiyadda fiidiyowga, AI, IoT, dhufto ee daruuraha. Shirkad isku dhafan R&D, suuqgeynta, iyo silsiladda wax soo saarka, Meari waxay bixisaa xalka hal-joogsiga xalka fiidiyowga fiidiyowga ah.
Meari Teknolojiyada waxaa ka go'an inay soo saarto oo ay soo saarto alaabada fiidiyowga guryaha casriga ah isla markaana ay ku dadaasho inay macaamiisha adduunka siiso alaab guri oo tayo sare leh, xalka amniga guriga oo hal-joogsi ah, iyo adeegyo habaysan oo heer sare ah.
Waxaan xoogga saareynaa horumarinta wax soo saarka iyo tikniyoolajiyadda hal abuurka leh waxaanna bilaabi doonnaa waxyaabo badan oo fiidiyoow ah oo fiidiyoow ah, oo ay ku jiraan kamaradaha gudaha, kaamirooyinka dibedda, kamaradaha banaanka u janjeera, kamaradaha batteriga, albaabbada caqliga leh, kaamirooyinka daadka, kormeeraha ilmaha, iyo moduleka IoT video.
Waqtigaas kadib wali waxaan ahayn koox yar oo dad darsin ah, waxaanan horumarinayna badeecadeenii ugu horeysay xafiiskayaga Hangzhou.
Waqtigan xaadirka ah, waxaan haynaa boqolaal shaqaale ah, waxaanan laamo ka aasaasnay ​​Yurub. Alaabtayada iyo adeegyadeenu waxay daboolayaan in ka badan 150 dal iyo gobol, waxayna soo galeen inta badan suuqyada waaweyn ee caanka ka ah Yurub iyo Ameerika, sida Walmart, Buy Best, Home Depot, Kingfisher, iyo MediaMarkt. Shixnadda sannadlaha ah waxay gaaraysaa tobanaan milyan, oo u adeegaysa tobanaan milyan oo macaamiil ah adduunka oo dhan.
Kooxda aasaasiga ah ee Meari Technology waxay ka kooban yihiin khubaro sare oo R&D ah, khubaro ganacsi, iyo khubaro sahayda sahayda leh khibrad wax ku ool ah oo ku saabsan dhinacyada guriga caqliga leh, IoT iyo teknolojiyadda fiidiyowga muddo ku dhow labaatan sano. Xubnaha aasaasiga ahi waxay ka yimaadeen nabadgelyada adduunka hoggaamineysa, shirkadaha IoT iyo AI.
Kadib sanado horumar ah, Meari wuxuu dhisay koox awood badan oo R&D ah. Waqtigan xaadirka ah, in ka badan 40% shaqaalaha shirkaddu waxay ka yimaadeen waaxda R&D, oo ay ku jiraan naqshadeynta garaafka, naqshadeynta warshadaha, qaab dhismeedka, naqshadeynta qalabka, softiweerka gundhigga, App, dariiqa daruuriga ah iyo server, iwm.
Meari waxaa laga aasaasay Hangzhou.
Shahaadada ka qaado ISO 9001 iyo ISO 14000.
Alaabooyinka ayaa soo galay suuqyada Yurub iyo Waqooyiga Ameerika.
Shahaado ka haysato BSCI.
Alaabtu waxay soo galeen meheradaha tafaariiqda sida Walmart iyo Kinfisher.
Wuxuu bilaabay inuu soo galo suuqyada Australia, Japan iyo Kuuriya.
Ka gudbay shahaadada qaranka ee farsamada sare.
Waxaa loogu magac daray Forbes Top 100 Shirkadaha AIoT.
Waxaa laga furay suuqyada Koonfurta Ameerika, Koonfur-bari Aasiya iyo Hindiya.
Waxaa la sii daayay noocyo badan oo fiidiyoow ah oo fiidiyow guriyeed ah, kuwaas oo badeecooyinka ku shaqeeya batteriga si wanaagsan loogu iibinayo Amazon.
Laan ka aasaasid Yurub.
Xamuul sanadle ah ayaa galay safka hore ee warshadaha.
Sii waday sii deynta alaabada jiilka labaad ee batroolka ku shaqeeya iyo Kormeerayaasha Ilmaha.
Ku guuleystay Abaalmarinta Evergreen ee Magazine Magazine.
Waxyaabaha taxanaha ah ee 'Optics' waxay ku guuleysteen Abaalmarinta Dot Red iyo IF Design Award.
Meari waxay u hogaansan tahay mabda 'adeeg ee "macaamiisha dalabka u janjeedha, R&D oo ah udub dhexaadka", waxayna ku dadaaleysaa inay siiso macmiil walba adeeg tayo sare leh, haboon, hal-joogna ah oo xalka amniga fiidiyowga ah.
Maaddaama ay tahay shirkad tiknoolajiyad ku saleysan, Meari wuxuu leeyahay tiknoolajiyad isdaba-joog ah oo ku saabsan berrinka kormeerka fiidiyowga casriga ah, oo ay ku jiraan:
Naqshad Muuqaalka Muuqaalka
Habka Qaabdhismeedka Aad u Fiican
Algorithm Kala-Bixinta Sawirka ISP
Isbarasho Shabakad Caqli leh
Meari waxay leedahay khadka wax soo saarka fiidiyowga oo dhameystiran, oo ay kujiraan kaamirooyinka go'an ee gudaha (Mini taxanaha), kamaradaha gudaha ee PTZ (Xawaaraha taxanaha ah), kamaradaha xadhkaha leh ee dibada (Bullet taxane), kamaradaha PTZ ee banaanka ah, kormeerayaasha ilmaha, kaamirooyinka batteriga (Snap Series), kaamirooyinka albaabka xariifka ah. (Taxanaha Bell), Kaamirooyinka Iftiiminta daadadka (Duulista taxanaha), iyo modullada fiidiyowga ee la kulma alaabooyinka kale ee guryaha sida garaashka, quudinta xayawaanka, qufulka albaabka smart, iwm.
Isla mar ahaantaana, Meari waxay taageertaa noocyo buuxa oo ah xalka helitaanka alaabada IoT, taasoo u oggolaanaysa macaamiisha inay adeegsadaan APP midaysan si ay u maareeyaan noocyo kala duwan oo guryo caqli leh.
Soo bandhig alaab guri oo caqli badan oo macaamiisha ka yaabisa.
Noqo shirkad tiknoolaji ah oo la tartanta suuqa adduunka.